Ahoana raha tsy mampiseho vokatra enti-miasa Apple amin'ny 27 martsa? | Avy amin'ny mac aho
Ahoana raha tsy mampiseho vokatra enti-miasa Apple amin'ny 27 martsa?
Ny fanontaniana lohateny dia mety ho hafahafa raha jerena fa ny vokatra sasany dia aseho amin'ny hetsika Apple hatrany amin'ny volana martsa, fa amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny fifantohana be loatra amin'ny sekoly, dia nisy zava-nitranga sahala tamin'ny taona lasa tonga tao an-tsaina ary tsy naseho azy ireo koa ny vokatra fa kosa fampiharana hafa ary amin'ny zavatra hafa.
Lojika inona isika rehetra dia maniry ny hanavao ny vokatra Apple toy ny iPad an'ny 2017, izay mandefa MacBook ho azo antoka ny fanoloana ny MacBook Air sy ny Apple Pencil mifanaraka amin'ny iPads, iPhones rehetra sy maro hafa. Ahoana anefa raha tsy mampiseho vokatra enti-miasa Apple amin'ny 27 martsa?
Hanomboka ny lahatsoratra aho amin'ny fanazavana izany hevitra manokana io ary miresaka amin'ny fomba fijeriko manokana fotsiny aho ny fomba fijery ny zava-nitranga taloha izay notazonin'i Apple mifandraika amin'ny fanabeazana. Amin'ity tranga ity, toy ny tamin'ny tranga hafa, Apple dia nisy tsaho momba ny vokatra vaovao ary mazava ho azy fa tsy izy rehetra no nanolotra vokatra.
Ary tsy tantara an-tsehatra ihany koa ny tsy famoahan'izy ireo vokatra vaovao
Tamin'ny 2012, ohatra, Apple dia nanao fanambarana ny hetsika iray mitovy amin'ilay notanterahin'izy ireo tamin'ity taona ity ary amin'ity vokatra ity dia tsy nisy vokatra natomboka, fa fampiharana ary zavatra hafa. Ary tsy amin'ireto fampisehoana rehetra ireto dia mila mahita ekipa vaovao isika na eny. Apple dia nifantoka tamin'ny sekoly tato ho ato ary ny fampisehoana dia natao tao amin'ny sekoly ambaratonga ambony any Chicago, midika izany fa ho an'ny sehatry ny fanabeazana tanteraka izany, misalasala aho fa te-haneho vokatra vaovao amin'ny sekoly izy ireo. manana safidy hafa amin'ny toeram-pivarotana hafa izay mahazaka olona maro na fampahalalam-baovao mahazatra.
Eny, nasaina ho amin'ilay hetsika ihany koa ny fampahalalam-baovao, saingy zavatra iraisan'ny rehetra io ary noho izany antony izany dia tsy mila mieritreritra iPad na Mac na famelabelarana iPhone SE 2 mihitsy isika araka izay azo vakiana amin'ny media nomerika sasany. Na izany na tsy izany isika sy Izaho manokana koa dia te handefa vokatra vaovao sy vidiny ambany kokoa noho ny ankehitriny noho ny fialàn'ireo vaovao, fa tsy misy tsaho mazava na "misisika" momba ny vokatra vaovao mety hitranga ary zavatra iray mahatonga ahy hieritreritra ihany koa fa tsy hahita fitaovana amin'ny talata 27 isika.
Fotoana tokony hiandrasana sy hijerena izay asehon'izy ireo, fa ny fahatsapana voalohany momba ireo vokatra vaovao dia nivoaka avy tao an-tsaiko aho nahita zava-nitranga teo aloha ary indrindra noho ny tsaho tao amin'ny tambajotra, izay tsy misisika toa ny tranga hafa izy ireo. Ho hitantsika eo ny farany ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Ahoana raha tsy mampiseho vokatra enti-miasa Apple amin'ny 27 martsa?
Apple dia namoaka ny beta 6 an'ny macOS High Sierra 10.13.4
Atsaharo ny modely Bluetooth an'ny Mac anao raha manana olana amin'ny fifandraisana ianao